၂၀၁၀ပြည့်နှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက်တွင် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးရခဲ့မှု ၆၂ နှစ်မြောက် ရှိခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံအတွင်း တည်ဆောက် ထားသည့် သမိုင်းဝင် လွတ်လပ်ရေး
ကျောက် တိုင်ဖွင့်လှစ်မှုသက်တမ်းမှာ နှစ် ၆၀ ရှိပြီ။
အလယ်ပင်မကျောက်တိုင်ကြီးနှင့် အ ရံကျောက်တိုင်ငယ်များကို ငါးမြှောင့်ကြယ် ပုံသဏ္ဌာန်ပြုလုပ်ထား သဖြင့် အထက်မှစီး ၍ကြည့်လျှင် အလံတော်တွင်မြင်ကြရသည့် အတိုင်းကြယ်ကြီးတစ်လုံးတွင် ကြယ်ငါးလုံး ရံလျက် တွေ့မြင်နိုင်သည်။
လွတ်လပ်ရေး ကျောက်တိုင်၏ ၀န်း ကျင်၌ ဆူးလေ စေတီတော်မြတ်ကြီး၊ တရား ရုံးချုပ် အဆောက်အုံဟောင်းကြီး၊ မြို့တော် ခန်းမစသည့် သမိုင်းဝင် ရှေးဟောင်း အ ဆောက်အအုံများ ရှိသည့်အတွက် လွတ် လပ်ရေး ကျောက်တိုင် ၏ အနှစ်သာရနှင့် အဓိပ္ပာယ်မှာ ပို၍ လေးနက် ပေါ်လွင်စေသည်။
လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်အခြေပတ်လည်၌ခြင်္သေ့ရုပ်၁၀ရုပ်ဝန်းရံစောင့်ကြပ်ပြီးကမ္ပည်းမော်ကွန်းရေးထိုး ထားသည့် လွတ်လပ်ရေးနှင့်တိုင်းရေးပြည်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှာ တိုင်းပြည်အတွက် အနှစ်သာရနှင့်အဓိပ္ပာယ်လေးနက်လှသည်။ ဖတ်ကြည့်သောအခါဇာတိသွေး ဇာတိမာန် များတက်ကာ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် မျိုးချစ်စိတ် များတဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကြက်သီး ဖြန်းဖြန်းထမိသည်အထိ နှလုံးသား တွင် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းခံစားမှု ဖြစ်ရသည်။ နှလုံးသားစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ ဦး နှောက်တွင်လည်း စဉ်းစားစရာ၊ တွေးခေါ်စ ရာ၊သင်ခန်းစာယူစရာ၊ မျှော်လင့်စရာများ ကို အတွေးမုန်တိုင်းဆင်မိသည်။
လွတ်လပ်ရေးရရချင်း လွတ်လပ်ရေး ကြေညာစာတမ်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယ နေ့ခေတ်လူငယ်များ သိကြမည်မဟုတ်။ ဖတ်ဖူးကြမည်လည်းမဟုတ်။ လူကြီးများ လည်းမှတ်မိကြတော့မဟုတ်။ လွတ်လပ် ရေး ကြေညာစာတမ်း အထောက်အထားကို ရှာဖွေရန်လည်း မလွယ်။
မည်သို့ဖြစ်ဖြစ် လွတ်လပ်ရေးကြေ ညာစာတမ်းသည် သမိုင်းဝင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရှိသရွေ့မြန်မာတို့၏နှလုံးသားထဲတွင်စွဲစွဲမြဲမြဲကမ္ပည်းမော်ကွန်းတင်ထားကြရမည့်သမိုင်းအမွေကောင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါအတိတ်မှသမိုင်းအမွေကောင်း သည်ပစ္စုပ္ပန်အတွက်အသုံးဝင် အကျိုးရှိသ လိုအနာဂတ်အတွက်လည်း အရေးပါသည်။ သားစဉ်မြေးဆက် အဆင့်ဆင့်လက်ဆင့် ကမ်းသွားရမည့် နိုင်ငံရေးအမွေဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် အနာဂတ်တွင် ဒီမိုကရေ စီနိုင်ငံ အဖြစ်တက်လှမ်းပြီး နိုင်ငံရေး လုပ် မည့်လူတိုင်း လွတ်လပ်ရေး ကြေညာစာတမ်း ကို မကြာခဏ အခေါက်ခေါက် အခါခါဖတ် ကြည့် သင့်ကြသည်။ နိုင်ငံရေး လုပ်မည့်လူများအား လွတ် လပ်ရေး ကြေညာစာတမ်းဖတ်ပြီးမှ၊ လေ့ လာပြီးမှ၊ ဝေဖန်သုံးသပ်စဉ်းစားတွေးခေါ် ပြီးမှနိုင်ငံရေးလုပ်ပါဟု တိုက်တွန်းလိုသည်။
ရှာဖွေစုဆောင်းထိန်းသိမ်းထားသည့် လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းအပြည့်အစုံ ကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ အောင်စေသတည်း
၁။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၀၉-ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆုတ်၉-ရက် (အင်္ဂလိပ်သက္ကရာဇ် ၁၉၄၈-ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၄-ရက်)တနင်္ဂနွေနေ့ ကောင်းမြတ်သန့်စင် မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသောအခါ၌ ဤငါတို့မြန်မာပြည် သည် လုံးဝလွတ်လပ်သော အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ် သို့ ရောက်ပြီ။
၂။ ဤငါတို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး သည် လိုရာမတပြည့်စုံလှ၍ ဘူမိနက်သန် မှန်သောမြေထူးမြေမြတ်လည်းဖြစ်၏။ မွန် မြတ်သန့်စင်သောတရားထူး တရားမြတ်တို့ တည်ရာ မြေကောင်းမြေမွန်လည်းမှန်၏။ မြေတွင်းမြေပြင် အထူးထူးသော ရတနာ အပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံသဖြင့် သတ္တ၀ါအ ပေါင်းတို့ ဆွတ်ယူစားသုံး ကမ္ဘာဆုံးသော် လည်း မသုဉ်းမကုန်နိုင်သော ပဒေသာစစ် အနှစ်သာရကြွယ်ဝပြည့်စုံသော မြေလည်း ဖြစ်၏။ ဘူမိနက်သန်မှန်လှထူးချွန် ဤမြေ မွန်မြေမြတ်၌ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာစသည်ဖြင့် တစ်သွေးတစ်သား တစ်မိဖွားဖြစ်ကြကုန်သောငါတို့သည် နှစ် ပေါင်းထောင်ရာ သင်္ချာပွားတက် ရေတွက် ခြင်းငှာမတတ်နိုင်ရာသော ရာဇ၀င်ရှည်ဝေး ရှေးပဝေဏီ မှစ၍ တညီတညွတ် တစုတရုံး လွတ်လပ်သောလူမျိုးအဖြစ် တည်ခဲ့ကြ၏။ တကောင်း၊ သရေ ခေတ္တရာ၊ ပုဂံ၊ မြင်စိုင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ ပင်းယ၊ အင်းဝ၊ ကုန်းဘောင် ထို့ နောက် မန္တလေးအထိငါတို့၏လွတ်လပ်ရေး သည် နေရောင်လ၀ါပမာကဲ့သို့ တဖြာဖြာ တ၀င်းဝင်း ကမ္ဘာချဉ်းအောင်ထွန်းလင်းခဲ့ပေ။ သို့ရာတွင်ကမ္ဘာ့တန်ဆာ ကာလအသ င်္ချေတည်နေအပ်သော နေမင်းသူရိယာ လစန္ဒာတို့ပင် ဆီးနှင်းမြူတိမ်ဖုံးအုပ်၍ ခဏ ခေတ္တအရှိန်အ၀ါညှိုးလျော်နွမ်းလျ မထွန်း မပဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ ငါတို့၏လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံတော်သည်လည်း လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းလေးရာခန့်က ဥရောပ တိုက်မှ ထွက်ပေါ်လာ၍ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ရစ်ပတ် အုပ်ဖုံးခဲ့သော နယ်ချဲ့ဝါဒကြီး နှင့် မရှောင်မကွင်းသာ ကြုံ ကြိုက်ဆုံတွေ့မိ၍ ပဋ္ဌမ အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်၌ ရခိုင်၊ တနင်္သာရီ၊ ဒုတိယ အင်္ဂလိပ် မြန်မာစစ်၌ ဟံသာဝတီ၊ ပဲခူး၊ တတိယအင်္ဂလိပ် မြန်မာစစ်၌ မန္တလေးရတနာပုံ သုံးကြိမ် သုံးတန်ချ အပ်ရခြင်းဖြင့် ဤ မြေထူးမြေမြတ်၌ နှစ်ပေါင်း ထောင်ရာစောင့်ထိန်း၍ လာ ခဲ့ကြသောငါတို့၏ လွတ်လပ် ရေးသည် ငါတို့ လက်မှလွတ်၍ လက်အောက်ခံဘ၀သို့ လုံးဝ ရောက်ခဲ့ကြရသည်။ သို့သော် နေမင်းသူရိ ယာလစန္ဒာတို့ကို ဆီးနှင်းမြူ တိမ်တို့သည် မည်သို့ပင်ဖုံး လွှမ်းစေကာမူ နေလ တို့၏ အရှိန်အတောက်ကို မခံနိုင်ရ ကား ခေတ္တမျှနှင့်ပင် လွင့်စင် ကွယ်ပျောက်၍ နေ၀ါလ ရောင်သည် ပကတိအသရေ ကိုပြန်၍ ဆောင်လေဘိသကဲ့ သို့ ငါတို့အပေါ်၌လွှမ်းဖုံးအပ် သောနယ်ချဲ့ဝါဒသည် ငါတို့၏ ကမ္ဘာရှည်မြင့်ရင့်မာလှသော လွတ်လပ်ရေး စိတ်ဓာတ်၏ အရှိန်အတောက်ကို မခံနိုင် ရကား ခြောက်ဆယ့်တစ်နှစ်တစ်လနှင့် တစ်ရက်သောအခိုက်အတန့်ကလေးမှာပင် အလိုအလျောက် ကွယ်ပျောက်သွားရသ ဖြင့် ဤနေ့ဤအခါမှစ၍ ငါတို့သည် အသူ ရိန်ခံတွင်းမှ ရှင်းရှင်းကြီး လွတ်မြောက်အပ် သော လပြည့်စန်းပမာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ် ချမ်းမြေ့သာယာစွာဖြင့် လွတ်လပ် သော ဘ၀ထူးဘ၀မြတ်ကို လက်ဆုပ်လက်ကိုင် အပိုင်ရရှိကြပြီ။
၃။ ယခု ငါတို့ရရှိအပ်သော လွတ်လပ် ရေးသည် ရေတွင်ရုပ်ရေး မြသွေးကောင်း ကင်တိမ်ရိပ်ထင် သကဲ့သို့သော လွတ်လပ် ရေးမဟုတ်၊ ငါတို့အား လွတ်လပ်ရေးလမ်း စဉ်သို့ ညွှန်လည်းညွှန်ပြလမ်း စရှာကြံအမြန် ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ခဲ့ကြပေသော ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အ၀၀သော ကူး တို့မှူးခေါင်းဆောင်ကြီးတို့၏ မဆုတ်မနစ် သောလုံ့လ မလျော့သောဝီရိယဆီမီးတန် ဆောင် ကဲ့သို့ ထွန်းပအပ်သောÓဏ်မျက်စိ ၀ဇီရစိန်သွားကဲ့သို့ စူးရှသောသတ္တိတို့ ကြောင့် အဟံမမသံပ ကြုံးဝါးအခြားအခြား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံကြီးတို့နှင့်တန်းတူ မြူ တစ်ခြမ်းမျှမလျော့မလို ထိုထိုသို့ သော တန် ခိုးရှိန်ဝါတေဇာအပေါင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံသော အချုပ်အခြာတည်းဟူသော အာဏာထူး အမြတ်ကို ငါတို့လက်ကိုင် အပိုင်ရရှိကြပြီ။
၄။ ငါတို့သည် တစ်မျိုးဘာသာ တစ် စိတ်တစ်ဒေသ၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို မလိုလား ကျောသား ရင်သား သူကားငါ ကားခွဲခြားခြင်းကိုအလိုမရှိ မြစ်ချောင်း သီ တာ သမုဒ္ဒရာတောင်တန်းတို့ဖြင့် ကမ္ဘာ့ဓမ္မ တာသဘာဝအပိုင်းအခြားထင်ရှားစွာ သတ် မှတ်အပ်သောရာဇ၀င်ရှည်ဝေး ရှေးပဝေဏီ မှစ၍ယခုထက်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံသားဟုသ မုတ်အပ်သူတိုင်းရင်းသားအပေါင်းတို့ ဇာတိ ချက်ကြွေ နေထိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံတော် တစ် ၀ှမ်းကို တစ်သွေးတစ်သားတည်းဟူသော ကြိုးထူး၊ တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်းဟူသော ကြိုးထူး၊ အလိုအလျေက် သဘာဝအ ထောက်အပံ့ဖြင့်သာလျှင် ဖြစ်ပေါ်အပ် သောစေတနာတည်းဟူသောကြိုးထူး ဤ ကြိုးသုံးပါးဖြင့်ကမ္ဘာဆုံးတိုင် မြဲခိုင်တည်တံ့ အောင် ရစ်ပတ်ဖွဲ့စည်းအပ်သော ပြည် ထောင်စုအဖြစ်ကိုလက်ဆုပ်လက်ကိုင် ငါတို့ အပိုင်ရလေပြီ။
၅။ ငါတို့နိုင်ငံတော်ကြီးသည် မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက် တစ်ဖွဲ့တစ်သင်း၏ အမွေအနှစ်မဟုတ်၊ မည်သူတစ်ဦးတစ် ယောက်တစ်ဖွဲ့တစ်သင်း၏ ပုဂ္ဂလိကအပိုင် ပစ္စည်းမဟုတ်၊ မည်သူတစ်ဦးတစ် ယောက် တစ်ဖွဲ့တစ်သင်းက ချုပ်ကိုင်အနိုင်သိမ်းယူ အကျိုးခံစားအပ်သော နိုင်ငံမဟုတ်၊ အတိတ် ကာလလည်းကောင်း၊ ယခုမျက် မှောက်တွင်လည်းကောင်း၊နောင်လာလတံ့ သော အနာဂတ်ကာလ ၌ လည်းကောင်း၊ ငါတို့ပြည်ထောင်စုကြီးအတွင်း၌ မှီတင်း နေထိုင်ကြသောကြီးငယ်ဝေးနီး ကျား/မ မခြား သစ္စာတော်ခံနိုင်ငံသား ဟူသရွေ့ ဒို့၏အမွေအနှစ်အပိုင်ပစ္စည်း အကျိုးခံစား ရာဖြစ်သည် ဟူသော လူ့ဘာသာ လူ့တရား နှင့်အညီကမ္ဘာဦးကာလလူတို့၏ စည်းရုံးမှု ၌လူအပေါင်းတို့၏ သဘောဆန္ဒအရလူ အ၀ှမ်း၏အကျိုးကိုကောင်းစွာ ဆောင်ရွက် နိုင်အံ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးကောက်၍ သမ္မတ တင်မြှောက်ကြသော မဖောက်မပြန် မစွန်း မငြိပကတိသန့်ရှင်းဖြူစင်သော မူလလူ့ဝါဒ နှင့် လျော်စွာ စည်းကမ်းဥပဒေ သေချာထင် ရှားစွာပိုင်းခြားသတ်မှတ်တူညီသော တရား တူညီသောအခွင့်အရေးတူညီသော အဆင့် အတန်းအားဖြင့် ကမ္ဘာအရှည်တည်စိမ့် သောငှာ လူအပေါင်းတို့၏ဆန္ဒသာလျှင် အဓိကဖြစ်သော သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် တည်းဟူသော မြတ်သော အဖြစ်ကို လက် ဆုပ်လက်ကိုင် ငါတို့အပိုင်ရပြီ။
၆။ သိကြကုန်လော့၊ယနေ့ မင်္ဂလာအ ပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောဤအချိန်မှစ၍ ငါတို့ ၏ မူလအပိုင်ဖြစ် သော လုံးဝလွတ်လပ်ရေး ကိုငါတို့ပြန်၍ယူပြီ။ တိုင်းရင်းသား အပေါင်း တို့ သွေးစီးညီညွတ်လျက် အခွင့်အရေး အဆင့်အတန်းတူညီသည့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတနိုင်ငံတော်ကြီးကို တည်ထောင်ပြီ။ ငါတို့လွတ်လပ်ရေးနှင့် ငါတို့နိုင်ငံတော်ကြီး ၏သစ္စာကိုကမ္ဘာဆုံးတိုင်မယိမ်းမယိုင် တည် မည်၊ ငါတို့သည်လွတ်လပ်သော နိုင်ငံဖြစ် သည်နှင့်အညီကမ္ဘာ့လွတ်လပ်သော နိုင်ငံ အပေါင်းတို့တရား သဖြင့် ကျင့်ဆောင်အပ် သောကျင့်ဝတ်ကို စောင့်ရှောက်ကျင့် ဆောင်မည်၊ ငါတို့၏လွတ်လပ်ရေးကို ငါတို့ ချစ်မြတ်နိုးသည်နှင့်အညီ တစ်ပါးသူတို့၏ လွတ်လပ်ရေးကိုလည်း ငါတို့လေးစားစောင့် စည်းမည်။ ငါတို့သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အလိုရှိသည်နှင့်အညီ ငါတို့ကဲ့သို့ လိုလား သူများနှင့်အတူလက်တွဲ၍ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်း ရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည်။ ဤငါတို့ကြေညာချက်ကို တစ်ကမ္ဘာ လုံးတစ်ယောက်မကျန် ကြားသိစေသတည်း။
လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း၊ အင်္ဂ လိပ်ပြန်ဆိုချက်ပထမမူကြမ်းကို ဒေါက်တာ မောင်မောင်ရေးရန်ဦးသန့်၊ ဦးခင်မောင် (တောသား)၊ဦးခင်ဇော်(ကေ)တို့က တာဝန် ပေးသည်။ အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်ဆိုချက်မူ ကြမ်းကို အဆိုပါဆရာများကပြင်ဆင် တည်းဖြတ်အတည်ပြုကြသည်။ နိုင်ငံရေးတွင် စာရေးဆရာသတင်းစာ ဆရာများ၏အရေးပါမှုမှာမသေး။ ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်ရေး ကြေညာစာတမ်းပါရင် (နှလုံးသား)ကိုထိစေပြီးဦးနှောက်ကို အတွေး မုန်တိုင်းဆင်စေသည့် ထူးခြားအချက်အ လက်များမှာ- - ဤငါတို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးသည် လိုရာ မတ ပြည့်စုံလှ၍ ဘူမိနက်သန်မှန်သော မြေထူးမြေ မြတ်လည်းဖြစ်၏။ မွန်မြတ်သန့်စင်သော တရားထူး တရားမြတ်တို့တည်ရာ မြေကောင်းမြေမွန်လည်း မှန်၏။ မြေတွင်းမြေပြင် အထူးထူးသောရတနာ အပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံသဖြင့် သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့ ဆွတ်ယူစားသုံးကမ္ဘာဆုံးသော်လည်း မသုဉ်းမကုန် နိုင်အောင် ပဒေသာ စစ်အနှစ်သာရ ကြွယ်ဝပြည့်စုံ သောမြေလည်းဖြစ်၏။ - ငါတို့သည် တစ်မျိုးဘာသာ တစ်စိတ်တစ် ဒေသ၏ကောင်း ကျိုးချမ်းသာကိုမလိုလား။ ကျောသားရင်သား ခွဲခြားခြင်းကိုအလိုမရှိ။ - ငါတို့နိုင်ငံတော်ကြီးသည် မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့တစ်သင်း၏ အမွေအနှစ်မဟုတ်။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့ တစ်သင်း၏ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပစ္စည်းမဟုတ်။ - မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက် တစ်ဖွဲ့တစ် သင်းက ချုပ်ကိုင်အနိုင်သိမ်းယူ အကျိုးခံစားအပ် သော နိုင်ငံမဟုတ်။ - ငါတို့လွတ်လပ်ရေးနှင့် ငါတို့နိုင်ငံတော်ကြီး ၏ သစ္စာကိုကမ္ဘာဆုံးတိုင် မယိမ်းမယိုင်တည်မည်။
လွတ်လပ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြောကြားရာတွင် “လွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ လွယ်တဲ့ကိစ္စမ ဟုတ်ဘူး။ လွတ်လပ်ရေးရရုံနှင့် ကျုပ်တို့ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းသွားကြရမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအခါကျမှ တ ကယ့်ပြဿနာတွေ ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ လွတ်လပ်ရေး က လမ်းဆုံးမဟုတ်ဘဲ လူတွေရဲ့ကောင်းစား ရေးကို ရောက်စေမယ့်လမ်းကြောင်းသာဖြစ်တယ်ဟု” ဖဆပလ ပဏာမပြင်ဆင်မှုညီလာခံတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီမိုကရေစီနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြောကြားရာတွင် “တကယ့်ဒီမိုကရေစီဆိုတာ နိုင်ငံရေးသဘောတရား အရ ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးအတွက် ပြည်သူတွေက တင်မြှောက်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့အစိုးရဖြစ်ရုံနဲ့ မပြီးသေး ဘူး။ အဲဒီအစိုးရဟာ ပြည်သူတွေရဲ့စီးပွားအဆင့် အတန်းကို အခွင့်အရေး တန်းတူရနိုင်တဲ့အခြေအထိ မြှင့်တင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမှ တကယ့် ဒီမို ကရေစီအထိ တက်လှမ်းနိုင်မယ်”ဟု ဖဆပလ ပဏာမ ပြင်ဆင်မှု ညီလာခံတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၀ပြည့်နှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့မည်။ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လျှင် ပြည်သူလူထုက လူကောင်း လူတော်တို့ကို ရွေးချယ်ကြရတော့မည်။ ပြီးလျှင် ဒီမို ကရေစီနိုင်ငံတက်လှမ်းမည်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတက် လှမ်းရာတွင် ပထမခြေလှမ်းသာရှိသေး၍ နောက်ထပ် ရှေ့ဆက်ရဦးမည့် ခြေလှမ်းများရှိသေးသည်။ တစ်ဆင့် ပြီးတစ်ဆင့် တစ်လှမ်းချင်းတစ်လှမ်း ဒီမိုကရေစီပန်း တိုင်ကို လှမ်းကိုင်နိုင်အောင် ဆက်၍ ဆက်၍ ချီတက် ကြိုးပမ်းကြရဦးမည်။ ယင်းသို့ ကြိုးပမ်းရာတွင် ယခုဆောင်းပါးသည် မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက် နှစ်သစ်လက် ဆောင်မွန်အဖြစ် အထောက်အကူ ဖြစ်ပါစေသတည်း။
မေးလ် ထဲသို့ ပေးပို့ လာသော သူငယ်ချင်းအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်.။ ဤပိုစ့်လေးဖြင့်
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဇန်နဝါရီ (၄)ရက်နေ့ ကို လေးလေးစားစားဖြင့် ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်း
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, January 02, 2010
မြန်မာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု မှတ်တမ်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း - အင်္ဂလိပ်စာတမ်းထိုး - ဂျပန်စကားပြော)။
မျှဝေ ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
One of the political events anticipated in 2010 is the elections promised by Myanmar's military government.
The polls scheduled to take place later this year would be the first in decades.
But while the military rulers say people will be allowed to have their say, many remain sceptical that the polls will pave the way to democracy and change.
၂၀၀၃ခုနှစ်မှာ အသက် ၅၀ အဘွားအရွယ်ရှိ ကျွန်မဟာ သြစတြေလျနိုင်ငံရှိ မိသားစုထံ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးလို့ ဆက်လက်ခရီးဆန့်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိ မြန်မာများကိုလည်း ကျွန်မကိုယ်တိုင် စာသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကတည်းက မြန်မာလူမျိုးအများစုကို ကျွန်မကူညီမိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ စက်တင်ဘာသံဃာ့ လှုပ်ရှားမှု အပြီးမှာ ပြည်ပကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာရတဲ့ ကျွန်မအနေနဲ့တော့ ထူးခြားတဲ့ အရှင်ထာဝရဆိုတဲ့ ကိုယ်တော်လေးနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ တွေ့ဆုံကြုံခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ရန်ကုန်မြို့မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှု့တွေ ဖြစ်ပေါ်ဖို့ စည်းရုံးခဲ့သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်လေးဟာ ကျွန်မအဖို့တော့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်မတို့တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီး မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်မဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ထွက်ခွာခဲ့ရပေမယ့် သူ့ကို ဆက်လက်ထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာလည်း ပိုပြီး ခင်မင်ရင်းနှီးလာပါတော့တယ်။ သူက ကျွန်မကို ရင်းရင်းနှီးနှီး “အမေ” လို့ခေါ်သလို ကျွန်မကလည်း သူ့ကို သားအရင်းတစ်ယောက်လို ချစ်ခင်မိလာပါတယ်။
အရှင်ထာဝရ၏ နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက သူ့ ဘ၀အတွက် အဓိကအလုပ်တစ်ရပ် ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ပြည်တွင်းမှာနေရတဲ့ သူရဲ့အခြေအနေဟာ မခံမရပ်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရ ပြီး ၊နောက်ဆုံးတောထဲကို ပုန်းရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်မ သူ့ကို ကူညီဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ သူရဲ့ဘ၀ဟာ အလွန်ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းပြီး သူရဲ့လုပ်ရပ်တွေ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေဟာ ကျွန်မကို ထိတ်လန့်ခဲ့ရပါ တယ်။
ကျွန်မ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ဆင်းလာမယ်သိရတော့ သူ တော်တော်လေး ဖြေသာသွားပါတယ်။ သူ့အနာဂတ်အတွက် ကျွန်မပေးမဲ့ အကြံဥာဏ်တွေကိုလည်း လိုက်နာပါမယ်လို့ သဘောတူတယ်။ သူနေရတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းဟာ မိဘမဲ့ကလေးဂေဟာတစ်ခုနဲ့ တွဲဆက်နေတာပါ။ ကျွန်မက သူတို့လေးတွေကိုလည်း တတ်အားသ၍ လှူဒါန်းပေးကမ်း ခဲ့ ပါတယ်။ ကလေးတွေက ကျွန်မကို ပန်းကလေးတွေ လက်ဆောင်ပေးရင်း ကြိုဆိုခဲ့တယ်။ တီးဝိုင်းကလေးတစ်ခုနဲ့တောင် ကြိုဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီနောက် အရှင်ထာဝရက ကျွန်မကို ခြံရံပြီး ကျောင်းပေါ်မှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဆီ ကျွန်မကို ခေါ်သွားပါတော့တယ်။ ကလေးတွေဟာ အတန်းလိုက်ကလေးတွေ စီတန်းပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာပုံစံအတိုင်း လက်အုပ်ချီထား ပုံကိုမြင်ရတော့ ကျွန်မအတွက် ကြည်နှုးရပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးက ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှေ့မှာ ဖယောင်းတိုင် ၁၀ တိုင်ကို ထွန်းညှို့ပူဇော်ပြီး ကျွန်မအနာဂတ်အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်။
ကျွန်မဟာ အခြေအနေဆိုးကို ပြေလည်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် ဒါကာမြို့ရှိ UNHCR အစည်းဝေးတွေကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တတ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်မဟာ သူ့ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံကို သွားဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့ရပါတော့တယ်။ ဆုတံ ဆိပ်တွေ ရခဲ့တဲ့ Burma VJ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကြောင့်လည်း အရှင်ထာဝရဟာ ပိုမိုလူသိများလာပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ဆက်ဆံရေးဟာ ပိုမိုရင်းနှီးလာခဲ့ကြပြီး ကျွန်မအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကို အကျွမ်းတ၀င်ရှိလာပါတော့တယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလမ်လန်ပူ ဘူတာရုံကလေးကနေ ရထားစထွက်တော့ ကျွန်မ မပြုံးပဲ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ခရီးသွားချင်တဲ့ စိတ်ကလွဲပြီး ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး စိတ်ကူးမရှိလို့ပါပဲ။ ကလေး ၄ယောက်၊ မြေး တစ်ယောက်ရှိတဲ့ အသက် ၅၀ ကျော် အရွယ်ကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီအခွင့်အရေးကိုတော့ ဆုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မဟာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ မိသားစုတွေကို တွေ့ဖို့ သြစတြေးလျနိုင်ငံကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပတ်လောက်နေမယ်လို့ စိတ်ကူးထားခဲ့ပေမဲ့ အဲဒီမှာ ၂လလောက် နေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလန်ကိုပြန်မဲ့ ကျွန်မဟာ မလေးရှားမှာ တစ်ပတ်လောက်နေပြီး သင်ကြားရေး အလုပ်တစ်ခုကို ရှာနေခဲ့မိပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကို သွားဖို့ ကျွန်မဟာ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဘန်ကောက် မြို့ကိုရထားနဲ့ ၂ရက်ကြာ ခရီးဆန့်ခဲ့ပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့ဟာ ကျွန်မထင်ထားသလိုပါပဲ။ မထွက်ခင်ကတည်းက ကျွန်မအနေနဲ့ ၀က်ဆိုက်တစ်ခု၏ အမေးတွေကို ဖြေခဲ့ရပါတယ်။ သင်ဟာ လူမှုမတရားမှုတွေကို စိတ်ဝင်စားလား၊ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်က ပြသနာအရေးအပေါ် စိတ်ဝင်စားလားတဲ့၊ နှစ်ခုစလုံးအတွက် ကျွန်မအဖြေကတော့ “ဟုတ်ကဲ့” Yes လို့ပဲ ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက် ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းက နယ်စပ်မြို့ကလေးဖြစ်တဲ့၊ မြန်မာနဲ့နယ်ခြင်းနီးကပ်တဲ့ မဲဆောက်(Maesot) မြို့ကလေးကို ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
မဲဆောက်မြို့ကလေးဟာ ကျွန်မလည်ခဲ့ဘူးသမျှ နေရာတွေနဲ့ မတူ ခြားနားတဲ့ မြို့ကလေးပါ။ အဲဒီမြို့ကလေးကို ရောက်လာကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အကြောင်းကို ကျွန်မ အလွန်ပဲ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ အချိန်တိုကလေးအတွင်းမှာပဲ များပြားလှတဲ့ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေတည်းက အဖွဲ့တစ်ခုမှာ ကျွန်မ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးကို စတင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မဟာ အင်္ဂလ်ိပ်စာ လိုက်စားလိုသူ လူငယ်များ ကျောင်းသားတွေနဲ့ပဲ ခြံဝင်းတစ်ခုထဲမှာ နေခဲ့ပါတယ်။ နေတိုင်းလိုလို ကျွန်မ တို့ဟာသမိုင်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားခြင်း နိုင်ငံရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးကြခြင်း စတဲ့ ကျွန်မနှစ်သက်တဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ ဘ၀ တစ်ခုကို ရခဲ့တယ်လို့ဆိုရင် မမှားပါဘူး။
ကျွန်မ သူတို့ကလေးတွေကို ချစ်ခင်လာပါတော့တယ်။ ကျွန်မလိုပဲ အဲဒီမှာ အခြား ဆရာ ဆရာမတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကြောင့်သာ ပြည်ပကိုထွက်ပြေးလာကြပေမယ့် အမြဲတမ်း ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သူတို့လေးတွေ တသိုက်နဲ့ နေရတာကိုပဲ ကျွန်မ ကျေနပ်နေမိပါတယ်။ သူတို့ဆီကလည်း ကျွန်မ လေ့လာစရာတွေ အများကြီး ရခဲ့တယ်။ မူလစာချုပ်က သုံးလဖြစ်ပေမယ့် နောက်ထပ်ခြောက်လ အဲဒီမှာနေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၃ ဒီဇင်ဘာမှာတော့ ကျွန်မအင်္ဂလန်သို့ ပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ကျွန်မ ကျောင်းသားတွေနဲ့တော့ အဆက်အသွယ် မပြတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တတ်အားသရွေ့တော့ ကူညီခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေထဲက တချို့ကတော့ အိန္ဒိယ မြန်မာနယ်စပ်ကို ရွှေ့ပြောင်းသွားကြပြီး တစ်ချို့ဆို မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဖွင့်ထားတဲ့ ဆေးခန်းတစ်ခုမှာ ဆေးအကူအဖြစ် လုပ်နေကြပါပြီ။ ကျွန်မ အဲဒီ ဆေးခန်းလေးဆီ သွားလည်ချင်တာ ကြာပါပြီ။ ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီမှာတော့ ကျွန်မဆန္ဒ ပြည့်ဝခဲ့ပါတယ်။ ခင်မင်ရသူတွေနဲ့ ခဏတာနေဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ရက်တိုခရီးလေး စီစဉ်ပြီး သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ကျွန်မရဲ့ မူလအစီအစဉ်တွေ ပြောင်းသွားပြီး ကျွန်မပြောပြချင်တဲ့ ဇာတ်လမ်း စခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်မ ဘဂ်လားဒေ့ရ်ှကိုရောက်ပြီး မရှေးမနှောင်းခင်မှာပဲ စက်တင်ဘာသံဃာလှုပ်ရှားမှုကြောင့် မြန်မာပြည်ကနေ တိမ်းရှောင်လာတဲ့ ရဟန်းတော်တွေလည်း ရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ မြန်မာစစ်တပ်က ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်နိုမ်နှင်းခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာ သံဃာလှုပ်ရှားမှုအပြီးမှာ တိမ်းရှောင်လာခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ကို ကျွန်မ ရလိုက်ပါတယ်။ သူ့နာမည်ကတော့ အရှင်ထာဝရ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက မြန် မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ All Burma Monks Representative Committee ရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ဟာ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် လှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း ရန်ကုန် ဆူးလေဘုရား၌ ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့ဘဇာ(Cox’s Bazar) က ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်းတော်တစ်ခုမှာ အရှင်ထာဝရ နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဟာ ကျွန်မဘ၀ကို လုံးဝပြောင်းစေခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့အချိန်အထိ အရှင်ထာဝရဟာ ကျွန်မအပေါ် ဒီလောက်သက်ရောက်မှုရှိနေတာ ဘာကြောင့်ဆိုတာ ကျွန်မနားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီရဟန်းပျိုကလေးဟာ ကျွန်မတွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ သူများနဲ့မတူ ထူးခြားပါတယ်။ သူဟာ စကားပြောဆိုရာမှာလည်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မကို လုံးဝအနှောက်အယှက် မဖြစ်စေပါဘူး။ စကားပြောတဲ့အခါ သူဟာ ကျွန်မကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီး လေးလေးစားစား ပြောတယ်။ အစပိုင်းတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ အနည်းငယ်နေထိုင်ရခက်ပေမယ့် နောက်ပိုင်း သူ့စကားလုံးတွေထဲမှာ နစ်ဝင်သွားပါတော့တယ်။
သူဟာ အင်္ဂလိပ်လို မပြောပါဘူး။ ကျွန်မမိတ်ဆွေတစ်ယောက်က စကားပြန်အဖြစ် ကူညီပေးခဲ့တာပါ။ ကျွန်မတို့ သူ့ကို ဘယ်လို အကောင်းဆုံး ကူညီနိုင်မလည်းဆိုတာနဲ့ အခြားဒုက္ခသည်တွေအတွက်လည်း ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ဟာ အဲဒီခဏတာအတွက်သာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲပြီးတော့ အဲဒီအရာတွေကို အလေးထားလုပ် ဆောင်ဖို့နဲ့ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲကြောင်း ကျွန်မ သိလာပါတော့တယ်။ ဘာကြောင်းလည်းတော့ မသိဘူး၊ ကျွန်မ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အခိုးခံရပြီး အိန္ဒိယသွားဖို့အစီအစဉ်ကိုလည်း ဖျက်သိမ်းလိုက်ရပါတော့တယ်။ ကျွန်မ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ထွက်ခွာပြီး ၂ရက်အကြာမှာ ကျွန်မကို တွေ့ချင်လို့ခရီးရှည်ကြီးကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ ဆေးခန်းက ကျွန်မ တပည့်တွေခမျာ ရောက်လာကြပါတယ်။
ကျွန်မအနေနဲ့အမျိုးသမီးများ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့် စော်ကားမှုမှု ကင်းလွတ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လန်ဒန်အခြေစိုက် အမျိုးသမီးများခိုလှုံရေးအဖွဲ့(Women’s Refuge ) မှာ အလုပ်ပြန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအလုပ်ကို ကျွန်မ မြတ်နှိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ အတွေးဆန္ဒတွေကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက အခြေအနေတွေဆိုကိုပဲ တိုးတိုးပြီး ပြန် ရောက်နေပါတော့တယ်။
အရှင်ထာဝရကတော့ ကျွန်မကို ပုံမှန်အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး ကျွန်မတို့ MSN မှာ မကြာခဏ ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဥက္ကာလို့ ခေါ်တဲ့ လူတစ်ယောက်က သူ့ကို ဘုန်းကြီးကျောင်းပြင်ပဘ၀နဲ့ အဆင်ပြေအောင် ကူညီခဲ့ပါတယ်။ အခု သူဟာ စစ်တကောင်းနယ်မှာ နေထိုင်ပြီး ပြသနာပေါင်းစုံကိုလည်း တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဘုန်းကြီးအားလုံး ဘုန်း ကြီးကျောင်းတွေထဲမှာ သီတင်းသုံးနေထိုင်ဖို့ သွားကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အရှင်ထာဝရကတော့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို တက်တက်ကြွကြွလုပ်နေတုန်းပါပဲ။ ကျွန်မအနေနဲ့ UNHCR ကို သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ကြောင်းနဲ့ ကျရောက်နေတဲ့ ချိန်းခြောက်မှုတွေကို အကြိမ်ကြိမ် စာရေး အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ အခြေအနေတွေဟာ သည်းမခံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်လာပြီး အရှင်ထာဝရ တောကြီးထဲက ကျောင်းသင်္ခမ်းပဲ ပြန်ပြီး သီတင်းသုံးရုံက လွဲပြီး တခြားရွေးချယ်စရာမရှိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မမှာ သင့်တင့်လျှောက်ပတ် တဲ့ ၀င်ငွေနဲ့ သက်တောင့်သက်သာ အိမ်မှာ နေထိုင်နိုင်ပေမယ့် နည်းနည်းပဲ ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အရှင်ထာဝရခမျာ ကျွန်မအ ပေါ် လုံးဝ ယုံကြည်လာခဲ့တယ်။ သူက ကျွန်မကို “အမေ”လို့ ရင်းရင်းနှီးနှီးခေါ်တယ်။ ကျွန်မကလည်း တကယ့်သားအရင်း တစ်ယောက်လို သူ့ကို ချစ်ပါတယ်။
သူက ကျွန်မကို သူကို လာတွေ့ဖို့ တတွတ်တွတ် ပြောရှာတယ်။ ကျွန်မက သူ့ကို သိုသိုသိပ်သိပ်နေဖို့ လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ သူက သူအဖမ်းခံရပြီး မြန်မာပြည်ပြန်ပို့လည်း ဂရုမစိုက်ဘူး သူတောထဲမှာ မနေချင်တာကိုပဲ ပြောတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလည်း သူထင်သလိုလုပ်လိုက်မှာကို ကျွန်မ အလွန်စိုးရိမ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုသွားပြီး ကူ ညီဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ အရှင်ထာဝရ ကျွန်မ လာမယ်ဆိုတာကိုသိရင်ပဲ စိတ်အေးသွားပြီး သူ့အနာဂတ်အတွက် ကျွန်မရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လိုက်နာပါ့မယ်လို့ ဂတိပေးရှာတယ်။
တောကြီးထဲက အရှင်ထာဝရနေရတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းဟာ မိဘမဲ့ကလေးဂေဟာနဲ့ ဆက်ဆက်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မလည်း သူတို့ရဲ့ကြင်နာမှုတွေအတွက် ကျေးဇူးပြုတဲ့အနေနဲ့အလှူအတန်း ပြုခဲ့ပျါတယ်။ တောကြီးထဲကို တော်တော်ကလေး ကားမောင်းသွားရပါတယ်။ ကျွန်မ လမ်းလျှောက်ဖို့ ကားထဲက ထွက်ထွက်ခြင်းပဲ ရွာတီးဝိုင်းက စတင် တီးခတ်ပြီး ကလေးတွေက ပန်းတွေနဲ့ကျွန်မကို ကြိုဆိုကြပါတယ်။
အရှင်ထာဝရက ကျွန်မလက်မောင်းကို ကြင်ကြင်နာနာဖေးမပြီး တောင်ကုန်းပေါ်ကို ခေါ်သွားပါတယ်။ လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတေ့ာ ကလေးတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဓလေ့အတိုင်း လက်အုပ်ကလေးတွေ ချီလို့ ။ လက်နက်ကိုင်ရဲတွေကလည်း ကျွန်မကို စောင့်ကြပ်ပေးကြပါတယ်။ ရဲတွေကကျွန်မကို ဘယ်သူလည်းလို့မေးမြန်းစစ်ဆေးတဲ့အခါ ကျွန်မမိတ်ဆွေ က နောက်ထပ်မေးမြန်းတာ မလုပ်ရန်အတွက် Takar ၃၀၀ကို လက်သိပ်ထိုးပေးလိုက်တယ်။ အရှင်ထာဝရက ကျွန်မကို ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်နဲ့တွေ့ဖို့ ခေါ်သွားပါတော့တယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းကလေးဟာ သေးငယ်တဲ့ တဲကလေးသာဖြစ်ပြီး ပြတင်းပေါက်လည်း မရှိ။ အလင်းရောင်အတွက် ဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့ ထွန်းညှိုရတယ်။ နံရံရဲ့ အလည်မှာတော့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အတွက် လှပတဲ့ ကျောင်းဆောင်တစ်ခု ရှိပါ တယ်။ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ တပလ္လင်ခွေထိုင်ပြီး သူ့အနားမှာထိုင်ဖို့ကျွန်မကို လက်ယပ်ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်မအဖွဲ့တွေလည်း ဘုရားကျောင်းပေါ်သို့ရောက်လာကြတယ်။ ဆရာတော်က ဖယောင်းတိုင် ၁၀ တိုင်ထွန်းညှိုပြီး ကျွန်မအနာဂတ်အတွက် ဆွမ်းကို ဆန္ဒပြုပေးပါတယ်။ အရှင်ထာဝရဟာ ကျွန်မရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်ပြီး သူရဲ့နေထိုင် မှုအပေါ် ကျွန်မ ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မက လာရင်းကိစ္စအကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပြီး မိဘမဲ့ဂေဟာရဲ့ပတ်ဝန်ကျင်ကိုလည်း လိုက်လံကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မကို ထူးထူးခြားခြားပွဲလေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အရှင်ထာဝရမပါပဲ ကျွန်မ ပြန်လည် မထွက်ခွာချင်ပါဘူး။ သူ့အနေနဲ့လည်း သူ့အနာဂတ်အတွက် ကျွန်မတို့စဉ်းစားပေးနေစဉ်ကာလအတွင်း ကျွန်မမိတ်ဆွေ မိသားစုနဲ့ လာနေဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကျောင်းဝင်းအတွင်းက ထွက်ခွာလာတဲ့အချိန်အထိ တီးဝိုင်းကတီး ခတ်စဲဖြစ်လို့ ကျွန်မ ၀မ်းမြောက်ပီတိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တည်းခိုရာအိမ်မှာ အမျိုးသမီးတွေများလို့ အရှင်ထာဝရအနေနဲ့ အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ မူလဘုန်းကြီးကျောင်းကို သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ နံနက်ခြောက်နာရီ မထွက်ခွာခင် သူ့အနား မည်သူမျှ မရှိချိန်မှာ ကျွန်မ ၁၅ နှစ်တာ ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ လက်စွပ်တစ်ကွင်းကို အရှင်ထာဝရ သူ့အား ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ သူနဲ့ဝေးနေပေမဲ့လည်း အမြဲမိဘသဖွယ်ရှိနေတဲ့သဘောကို ဆိုလိုတာပါ။
ဘင်္ဂလားဒေ့်မှာရှိတုန်း ကျန်မမှာ ၁၃ ရက်တွင် ၆ ရက်ကို ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာပဲ ကုန်ခဲ့ရတယ် ။ အခြေအနေတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ UNHCR နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အစည်းအဝေးတွေပါ တတ်ရောက်နေခဲ့ရလို့လေ။ ကိုဥက္ကာက အမြဲတမ်းလိုက်ပါပေးလို့ အဖော်ရပါတယ် ။ ကျမ ခြေထောက်တွေ ဖောရောင်လာပါတယ်။ အရမ်းပင်ပန်းတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်နေရလို့ ကျမပျော်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အထိ မရောက်ခဲ့ပေမယ့် UNHCR အနေနဲ့တော့ ဒီပြသာနာကို ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ အရှင်ထာဝရာကို တောကြီးထဲကနေ ထွက်ခွာဖို့နဲ့ သူအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ကံမကောင်စွာနဲ့ပဲ အခြေအနေတွေ တိုးတတ် မလာခဲ့ပါဘူး။ အရှင်ထာဝရမှာလဲ ၂၀၀၉ ဂျွန်လ ၂၈ ရက်မှာ နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီ အိန္ဓိယသို့ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမ မိသားစု မိတ်ဆွေတွေနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေလဲ အဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ လတွေကို ကျမနဲ့အတူ စိတ်ရှည်လက်ရှည် နေပေးကြပါတယ်။ နာရီပေါင်းများစွာ ကျမ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့်ရ်ှက အခက်အခဲတွေက ကျမရဲ့ အချိန်နဲ့ စွမ်းအင်တွေကို အများကြီး ကုန်စေပါတယ်။ ကျမရဲ့ လျှိဝှက်စွာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ အခုမှတော့ အဆုံးသတ် ပန်းတိုင်ရောက်လုနီးပါပြီ။
ဆုတံဆိပ်တွေရခဲ့တဲ့ Burmar VJ ထဲက သူရဲ့မှတ်တမ်းဝင် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်လဲ လူသိများလာပါပြီ။ အခုအခါမှာ သူဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာ သီတင်းသုံးနေပြီ အခြားနှစ်ပါးသော ရဟန်းတွေကလဲ ကျွန်မကို အမေလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မလဲ ဗမာဘုန်းကြီးများဆီမှ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ လေ့လာနေရပါတယ်။ အရှင်ထာဝရဟာ အလွန်ကိုပဲ ထူးခြားသူပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ အစလည် မရှိ ၊ အဆုံးလည်း မရှိသောကြောင့် ဒီဇာတ်လမ်းဆုံးသွားပြီလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ပေးပို့လာသူ ကိုအောင်မျိုးသိန်း၊ အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Saturday, January 02, 2010
လူထုလှုပ်ရှားမှုဖေါ်ဆောင်ရေးနှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးအင်အားစုမှ နှစ်သစ်ကူးည “FREE” လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်။
ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက်နေ့၂၀၀၉ New Year အကြို ညက မန္တလေးမြို့ပေါ် နေရာအနှံ့အပြားမှာ “FREE 2010” ဆိုတဲ့ စာများ ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ ၅ ကျပ်တန်၊ ၁၀ တန်၊ ၂၀ တန်၊ ၅၀ တန်၊ ၁၀၀ တန်၊ ၂၀၀ တန် များ ကြဲဖြန့်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
“FREE 2010” စာတန်းပါ ပိုက်ဆံတွေကို မန္တလေးမြို့ပေါ် ၂၇ လမ်း၊ ၂၈ လမ်း၊ ၇၈ လမ်း၊ ၈၆ လမ်း၊ ၈၉ လမ်း၊ ၇၃ လမ်း ၃၅ လမ်း၊ ၆၈ လမ်း အစသဖြင့် လူစုလူဝေးရှိသည့် နေရာများမှာတွင် Happy New Year အော်ဟစ်တဲ့ အချိန်၌ ကြဲချခဲ့ကြပါတယ်။ လူအုပ်ထဲ ကြဲချခြင်းကြောင့် လူအတော်များများတော့ သတိထား ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အတော်များများမှလည်း ကောက်ယူသိမ်းဆည်းကြပါတယ်။
မန္တလေး ကျုံးနဘေးမှာတော့ ထောက်လှမ်းရေး၊ ရဲ၊ ကြံ့ဖွတ်၊ စွမ်းအားရှင်များက အပြည့်နေရာယူ စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။
ဒီ FREE (လွှတ်) လှုပ်ရှားမှုကို လဖစတ (လူထူလှုပ်ရှားမှုဖော်ဆောင်ရေးနှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် တိုက်ဖျက်ရေးအင်အားစု - ဗမာပြည်) က ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
"လဖစတ" အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ပြောပြတာကတော့ "ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ၂၀၁၀ ဆိုတဲ့ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကာလကြီး ရောက်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အကြိုအနေနဲ့ ဒီလို FREE လှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ စစ်အဆိုးရအနေနဲ့ ဘယ်လိုပဲ မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်ပေးမယ်ပြောပြော ယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့ အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်မပေးမှတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ အပြောနဲ့ အလုပ်မညီဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အဖမ်းဆီးခံ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ ဒီလို FREE သို့မဟုတ် "လွှတ်" လှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဗမာပြည်သူလူထုကြီးကို တိုက်တွန်းချင်တာက FREE ဒါမှမဟုတ် "လွှတ်" ဆိုတဲ့ စာသားတွေ တစ်နိုင်ငံလုံး နေရာအနှံ့ ကိုယ့်ဘာသာ လိုက်ရေးကြစေချင်တယ်။ ဘောပင်လေးနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆော့ပင်န်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်္ဘောဆေး/မှုတ်ဆေးနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ နယူးရီးယား ၂၀၁၀ နှစ်သစ် ပထမဆုံးနေ့ကစပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ဗမာပြည်နေရာအနှံ့ လိုက်ရေးကြဖို့ နှိုးဆော်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို ပိုက်ဆံ ဒါမှမဟုတ် စက္ကူစများပေါ်မှာလည်း FREE လို့ရေးပြီးလည်း ဖြန့်ဝေနိုင်ကြပါတယ်။"
FREE သို့မဟုတ် "လွှတ်" များ ရေးသားဖြန့်ဝေကြခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးကို တောင်းဆိုကြပါစို့ ။
လူထူလှုပ်ရှားမှုဖော်ဆောင်ရေးနှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် တိုက်ဖျက်ရေးအင်အားစု - ဗမာပြည်။
(Activists for Abolishing the Military Dictatorship - Burma Myanmar)။
ပြန်လည်မျှဝေ ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်းအားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
ငါတို့ အချင်းချင်းပဲသိတယ်။ ။
အရွေးမှား ကြမှာလဲကွယ်။ ။
ဤကဗျာကို ပေးပို့ ပေးသော ကိုမိုးကျော် (rfa) အားကျေးဇူး တင်ပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, January 01, 2010
လူငယ် ဆိုတာ လူငယ်နဲ့တူတဲ့ လွတ်လပ်မူကို လိုချင်ကြတယ်၊လွတ်လပ်မူဆိုတာလဲ အထိန်းအကွတ်
တယ်လို့အလကားနေရင်အပြောခံ ကြရမယ်ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ဥာဏ်တွေ ကောင်းရဲသားနဲ့ဘာအတွေ့
အကြုံဗဟုသုတ မှမရှိပဲ အရှက်ရကြရမယ် အဲ..ဒီထက်ဆိုးတာကအနာဂတ်ပျောက်ခြင်းပြသနာပါပဲ
အချို့သောမိသားစုတွေမှာရှိပါတယ်၊ငွေကြေးပြသနာ ပါ ..၊ဒီအချက်က လဲ အရေးကြီးပါတယ် .။
စာဖတ်ခိုင်းတတ်တဲ့မိဘတွေ ကိုရည်ရွယ် ပါတယ်။
ပိုအသက်ဝင်ပါတယ်ဒါမှပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအကြောင်းလူလောကရဲ့ရှုပ်ထွေးမူတွေကို တွေ့နိုင်မြင်နိုင်မှာပါ၊ဒီလို့ နဲ့ ခင်ဗျားတို့ သား/သမီးတွေဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူအသိုင်းအ၀ိုင်းကို
ကျွန်တော် ဟာလဲ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ ........ ။
မေးလ် ထဲကနေပြီး ဒီပို့စ်လေးကို တင်ပြပေးစေချင်တဲ့လူငယ် တဦးရဲ့ ရင်ဖွင့်ချက်လေးကို
တော်ကမြေတောင်မြောက်ပေးဘို့ကိုလုံးဝမလုပ်ပေးတဲ့ စစ်အာဏာရှင် အစိုးရ ..။သူများနိုင်ငံတွေလို
တခြားနိုင်ငံတွေမှာ မိဘကငွေကြေးမတတ်နိုင်ရင် အစိုးရ ရဲ့ထောက်ပံ့ငွေနဲ့ ကိုယ်တတ်ချင်တဲ့
ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကိုစာနာထောက်ထားမိတာကတော့အမှန်ပါ.။လူငယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ဒါကမှားတယ်လို့ထောက်ပြ ပြောပြရင်လည်းထောင်ဒဏ်က(၆၅)နှစ်ကျခံရအုံးမှာလေ.။
ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်နှင့် နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်းများအား စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နေသည့် ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ကိုကျော်သူ၏ (၂၀၁၀) ခုနှစ် ဆုမွန်ကောင်း။
ကိုကျော်သူ၏နှစ်သစ်ဆုတောင်းကိုပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။